“Waxaan doonayaa inaan raaco talaabooyinka Cristiano Ronaldo ee horyaalka La Liga”_ André Silva – Gool FM
“Waxaan doonayaa inaan raaco talaabooyinka Cristiano Ronaldo ee horyaalka La Liga”_ André Silva
(Sevilla) 03 Okt 2018. Weeraryahanka kooxda Sevilla André Silva ayaa xaqiijiyay inuu doonayo inuu raaco wadadii xidiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ahna gooldhaliyaha ugu sareeya taariikhda kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ee horyaalka La Liga.
22 jirkan reer Portuqal ee André Silva ayaa ugu dhaqaaqay kooxda Sevilla ee dalka Spain suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay heshiis hal xili ciyaareed ee amaah ah, wuxuuna kaga soo dhaqaaqay kooxda AC Milan.
“Ronaldo waxa uu sameeyay waxyaabo badan xirfadiisa horyaalka La Liga, laakiin aniga waan ku cusbahay halkan qof walba wuxuu doonayaa inuu jabiyo rikoorkiisa, balse wadada lagu gaari lahaa waa mid aad u dheer”.
“Waxaan doonayaa inaan raaco raadkii Cristiano Ronaldo ee horyaalka La Liga dalka Spain, lakiin Ronaldo waa Ronaldo waa halyay kubada cagta ah, maa aaminsani in ilaa iyo haatan aan 7 gool ee horyaalka ah aan u dhaliyay kooxda Sevilla”.
Paul Scholes oo shaaca ka qaaday sida ay layaab ugu noqotay inaan wali shaqada laga casilin Mourinho
Shaxda rasmiga ah ee PSG vs Red Star Belgrade (Cavani oo ku soo bilowday)